About Us - Zhejiang Feileisi agesi Co., Ltd
Senza izinto ngendlela ehlukile kancane, futhi lokho ngendlela esithanda ngayo!
Zhejiang Feileisi agesi Technology Co., Ltd yasungulwa ngo-2008, kuyinto nomkhiqizi professional udlulisela yezimoto, flashers, ukushintshwa, izinzwa, DC contactor, izintambo amahanisi kanye neminye imikhiqizo yezimoto kagesi.
Inkampani lidlule ISO / TS16949: 2009 izinga uhlelo isitifiketi ngo-2015 Imikhiqizo aphumelela ekuhlolweni e Ningbo izingxenye auto ukuhlolwa isikhungo, ngikutholile SGS-RoHS isitifiketi, European Union CE isitifiketi futhi ngafaka isicelo sokuba inqwaba patent umkhiqizo.
"FOOCLES" brand yenkampani, "FEILEISI" imikhiqizo brand, abathandayo izinga layo ozinzile futhi engabizi kakhulu emakethe. Akhishwe eYurophu, Americas, Middle East, eNingizimu-mpumalanga Asia nakwezinye izingxenye zomhlaba. Ngemizamo wenkuthalo bonke abasebenzi, i- "FOOCLES" Brand kwaziwa kahle yezimoto kagesi umkhakha step by step.
Ngomusa abangane wamukelekile ezivela emhlabeni wonke ukuza inkampani yethu, ukuxoxisana ibhizinisi, uqinise ukubambisana lobuchwepheshe, siyojabula ukuba ngikukhonze.
kanye nemithetho ukuhlolwa, wokugubha, emabhokisini isitoreji futhi isitoreji jikelele injongo udlulisela for izimoto. Le ndinganiso osebenza ku yezimoto DC wesifunda contact mechanical udlulisela kagesi (kuhlanganise-plug-in smal ...
E-Ikheli Zhejiang FEILEISI TECHNOLOGY Electrical CO., LTD.